भट्टीकि माललाई चिकेको – Nepali Sex Story
Home » Nepali Sex Stories » भट्टीकि माललाई चिकेको – Nepali Sex Story
मलाई रात भरी निद्रा लागेन । वरीपरी त्यही सरितालाई देख्थे । उसको दुध चुसेको र चिकेको सम्झदै कति खेर निदाएछु थाहै भएन । बिहान उठेको त मेरो कट्टु पुरै चिसो भए जस्तो लाग्यो । यसो छामेको त कट्टु भरि माल झरि रहेको । रात भरी चिकेको सम्झँदै सुतेकोले होला, Nightfall भएछ । हतार हतार उठेर नुहाई धुवाई गरे र फेरि लागे बजार तिर साथीहरू सँग भेट्न । साथीहरू सँग पनि फेरि त्यही केटीको कुरा भयो । फेरि साँझ पर्यो , फेरि त्यही भट्टी , फेरि रक्सी र सुकुटी । यसरीनै ३-४ दिन बित्यो । एक दिन मैले रक्सी खाँदै गर्दा सरितालाई बोलाए र भने “बहिनीको बिहा भएको छ कि छैन ?” ” छैन नि दाई , किन ?” उसले सोधी । “त्यतीकै सोधेको । अनि LOVE पेरको छ कि छैन ?” मैले फेरि सोधँ । “छैन नि , तपाईसँग गर्न मिल्छ ?” उसले सोधी । म त अकमक्क परे ।
बहिनी त निकै चालु रहिछ जस्तो लाग्यो । मैले पनि त्यही खोजि रहेको थिए । “मिल्न त मिल्छ , तर म सँग मात्रै LOVE गरेर हुँदैन । हामी ४ जना साथीहरू सबै सँग गर्नु पर्छ । हामी ४ जना एकदम मिल्ने साथी हौ । सकिन्छ ?” “भई हाल्छ नि ।” उनले भनि । अब चाँहि चिक्न पाईएला जस्तो लाग्यो । अनि बहिनी सँग करीब १ घण्टा जति कुरा गर्यौ । कुरा गर्न त साह्रै खप्पीस रहिछ बहिनी त । मैले मेरा साथीहरूलाई बाहिर जाने ईशारा गरे र तीनैजना पिसाब फेर्ने बहाना मा बाहिर निस्के । “सरिता , यसो घुम्न जाने हो बाहिर तिर ? शीतल हावा चलिरहेको छ ।” मैले सोधे । “हुन्छ , जाउँ न ।” उनले भनि र सरिता र म बाहिर निस्कियौ । साथीहरू पनि बाहिर नै बसि रहेको रहेछन । मैले हामीले बोल्ने भाषामा भने “छप्कीलाई सैठिन परको गब्बा तिर ठेकाउछु , हेल्मेट लिएर आउनु है (केटीलाई चिक्न परको गोठमा लान्छु , कण्डोम लिएर आउनु है)” मैले भने ।
हामी सरासर हिँड्न थाल्यौ । गाउँको छेउमा जङ्गल थियो र त्यँहा एउटा सानो गोठ जस्तो थियो । हामी त्यहाँ पुग्यौ । “एकछिन भित्र बसौ न है ” मैले भने । “किन भित्र जाने ? यहाँनै बसौन” उनले भनि । “एक छिन मात्रै क्या ।” मैले भने । उनले केही भनिनन् र म भित्र छिरे । सरिता पनि भित्र आई । भित्र छिरे पछि मैले सरितालाई अङ्गालो हाले र गालातिर किस गर्न थाले । शुरूमा त लजाए जस्तो गरि पछि त उनले पनि किस गर्न थालि । बिस्तारै दुधको पोका माड्न थाले । गाउँको केटी हो , निलो फ्रक र आकाशे सर्ट लाएकी थिई । मैले शर्टको बटन खोले र शर्ट पुरै निकाली दिए । यसो हेरेको त ब्रा पनि लाएको रहिन छ । केटाहरूले लाउने सेन्डो भेष्ट मात्रै लाएकी रहिछ । मैले त्यो पनि खोलि दिएँ , अब उ माथी पुरै नाङ्गै थिई । लुगा खोल्दा पनि केही नभनेकोले गर्दा , सरिता भालुनै हो जस्तो लाग्यो । मलाई अझ आँट आयो र उसको फ्रक मुनी बाट उचालेर पुतीमा हात पुर्याए । कट्टु चाँहि लाएको रहेछ । कट्टु बाहिर बाटै पुती खेलाईदिन पर्यो भनेर यसो औला छिराउन खोजेको त , कट्टुको भित्र बाक्लो कुरा भेटे । “कट्टु भित्र के छ तिम्रो ?” मैले सोधे । “महिनावारी भएको छ , अनि कपडा लाएको नि ” उसले भनि । हत्त न पत्त हात हटाए । कता कता घिन लागेर आयो । फेरि सोँचे , जे सुकै होस , मुखमा आएको माल पनि छोड्छ र जस्तो लाग्यो र उसको कट्टु र फ्रक खोलि दिए । अब सरिता नाङ्गै थिई । मैले पनि सबै लुगा खोले र उसलाई भुईमा सुताए । त्यती नै बेला केटाहरू आई पुगेछन र जिब्रो पड्काएर ईशारा गरे । “एउटा हेल्मेट भित्र ठेका त (एउटा कण्डोम भित्र देउ त)” मैले भने । केटाहरूले एउटा कण्डोम भित्र फालिदियो र कण्डोम लगाएर सरिताको पुती निर मेरो लाडो लगे ।
“सरिता , तिमीले पहिला पनि चिकीसकेको हो ?” मैले सोँधे । “२ चोटी मेरो LOVE परेको केटा सँग गरेको । तर मलाई छोडेर अर्कै केटीसँग बिहा गरि सक्यो ।” उनले भनि । मेरो लाडो उसको पुतीमा छिराए । “तपाईको त कति मोटो र लामो रहेछ । भित्र दुखे जस्तो भयो , अलि बिस्तारै गर्नु ल ।” उनले भनि । “तिम्रो पहिलाको केटाको चाँहि कत्रो थियो नि ” मैले सोधे । “तपाईको भन्दा त साह्रै सानो हो ।” उनले भनि । मैले उनलाई धमाधम चिक्न थाले । महिनावारी भएको पुती पनि चिकिन्दै थियो आज । उ पनि चिकाउन निकै सिपालु रहिछ । मुनी बाट कण्डो उचाली उचाली मलाई चिक्न सघाउँदै थिई । “अलि कस्सेर गर्नु न , अलि भित्र सम्म ठेल्नु न । एकदम मजा आयो आज । मेरो केटालाई त चिक्नै नआउने रहेछ । तपाईले मजाले चिक्नु हुने रहेछ । अझै , अझै , कस्सेर , आहहहह , ओहहहहहहहहहह, शशशशश………..” सरिता निकै ईमोशनमा कराउन थालि । मलाई पनि चिक्न मजा आई रहेको थियो । रक्सी खाएकोले गर्दा होला , माल झर्ने कुनै छाँटकाँट नै थिएन । गर्मीको मौसममा चिक्दा पसिनै पसिना भई सकेको थिए । एकछिन आराम गरेर फेरी सरिताको पुतीमा लाँडो हालेर हल्लिन थाले । भए भरको बल लगाएर कस्सी कस्सी चिक्न थाले । उसको पुतीले धेरै पानी फालेकोले गर्दा होला , चिक्दा खेरि “फ्याच्च , फ्याच्च , प्याच्च , प्याच्च” आवाज आई रहेको थियो । करी १५-२० मिनेट जति चिके पछि मेरो माल झर्ला जस्तो भयो , र झन कस्सी कस्सी चिक्न थाले । “आहहह, आहहहह, आहहहह” सरिता कराउँदै थिई । अन्तिम धक्का कस्सेर दिए, मेरो लाँडोले पनि माल झार्यो । म पुरै थाकेको थिए । शिथील भएर उसको माथी बसि रहे ।
“मजा आयो दाई आज , फेरि चिक्नु न एक पटक ” सरिता भन्दै थिई । “म धेरै थाके , मेरो साथीलाई पठाई दिन्छु ल । हुन्छ ?” मैले सोधे । ” नाई हुन्न । तपाईलाई पो चिक्न दिएको त । मलाई तपाई एकदम मन पर्छ त्यसैले ।” “अघि ४ जना सँगै LOVE गर्छु भनेको होईन?” मैले सोधेँ । सरिता केहि पनि बोलिनन । “प्लिज , आज एक चोटि मात्रै नि ल । त्यस पछि तिमी र म मात्रै गर्ने नि , हुन्छ ?” मैले भने । उनले “हुन्छ । तर आज एक चोटी मात्रै नि ल ।” भनि । म लुगा लाएर बाहिर निस्के अनि किरणलाई भने “किरण तँ जा , तेरो पाली । तर बिस्तारै चिक है त । माल दामी छ । चिक्न बवाल मजा आउँछ । पछि पछि पनि चिक्नु पर्छ , माया गरेर चिक है । धेरै जबरजस्ती नगरी चिक है ।” किरणले “हुन्छ ” भन्दै सरितालाई चिक्न गयो । बाहिर सब केटाहरू लाडोमा कण्डोम लगाएर तयार भएर बसि रहेका थिए । १ घण्टा सम्ममा हामी ४ जनाले चिकी सक्यौ । सबैजना दङ्ग थिए ।
सबैजना ले चिक्न मजा आयो भन्दै थिए । त्यस पछि मैले सरितालाई सोधे “कस्तो भयो ?” उनले भनि “रमाईलो भयो , मजा आयो । आज पहिलो पटक ४ जना सँग यसरी गरियो । तर जे होस मजा आयो , अलि पुती दुखि रहेको छ ।” मैले १००/- रुपैया उसको हातमा दिए र “नदुख्ने दबाई किनेर खानु नि ल ।” भने । “हुन्छ ” उसले भनि र उसलाई पुर्याईदिन हामी त्यहाँ बाट हिड्यौ । बाटो भरि उसको दुध माड्दै गए । घर पुगेर फेरि एकपटक सरितालाई चिकेको सम्झि सम्झि छोले अनि ओछ्यान तिर सुत्न लागे ।
bhatti ko bhalu chikeko, bhatti ko maal chikeko, nepali sex story, sathi haru milera chhikeko
Busty Nepali Teen Exposing – Nepali Naked Photos
Nepali Couple Fucking in Doggy Style